Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 lak
Alakamisy 06 Jona
“Amin’izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia horaisiko hianao, ry Zerobabela mpanompoko, zanak’i Sealtiela, hoy Jehovah, ka hataoko toy ny fanombohan-kase hianao; fa efa nifidy anao Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro.” (Hag. 2:23).
Ny hafatra farany nomen’ny Tompo an’i Hagay dia natolotra azy tamin’ny andro nanomezana ilay voalohany ho famenon’izany (jer. ny Hag. 2:22, 23). Nampitandrina i Jehôvah fa ho avy ny fandravana fanjakana sy firenena amin’ny andro fitsaran’ Andriamanitra. Amin’izany andro izany koa anefa, hoy ilay mpaminany, no hanatanterahan’ny mpanompon’i Jehôvah ny asam-pamonjena voatendrin’Andriamanitra. Takatry ny saintsika tsara fa amin’ny fiverenan’i Kristy fanindroany sy mandritra ny fotoana rehetra manaraka izany vao ho tanteraka amin’ny fara-tampony sy amin’ny fahafenoany izany.
Eto ny mpitarika ara-pôlitikan’ity firenena ity dia ampifandraisina amin’ny famirapiratan’ny fanjakan’i Davida, mpanjakan’ny Isiraely, izay nipoirany. Zafikelin’ny mpanjaka Joiakina i Zerobabela ary mpandova ara-dalàna ny fiandrianan’i Davida taorian’ny famaboan’ny Babilônianina. Governoran’i Joda teo ambany fanapahan’i Dariosa Lehibe, mpanjaka persianina, izy ary vy nahitana sy angady nananana teo amin’ny fananganana indray ny tempolin’i Jerosalema. I Jôsoà no mpisoronabe, izay nanampy koa teo amin’ny fananganana ny tempoly.
Voalazan’ny mpaminany fa ho fanombohan-kasen’ny Tompo i Zerobabela, izany hoe ho porofon’ny fahefana sy ny fananam-panjakana. Tahaka ny hanisian’ny mpanjaka iray tombokase ny antontan-taratasy ara-panjakana amin’ny alalan’ny perany, dia toy izany koa no hanamarihan’ny Tompo izao tontolo rehetra izao amin’ny alalan’ny asan’ny mpanompony. Na dia tsy tokony hatao tsinontsinona na oviana na oviana aza ny anjara asa lehibe notanan’i Zerobabela teo amin’ny fananganana indray ny tempoly, dia tsy tanterany avokoa ireo teny fikasana rehetra nomen’i Jehôvah azy tamin’ny alalan’i Hagay. I Jesôsy Kristy, (zanak’i Davida sy i Zerobabela) sy ny asany no tondroin’ireo mpanoratra ny Filazantsara ho fahatanterahana fara-tampon’ireo teny fikasana momba ny Mesia rehetra hita ao amin’ny Baiboly.
Vakio ny Lioka 24:13-27 ka ifantohy amin’ny fomba manokana ny tenin’i Kristy tamin’ireo lehilahy anankiroa. Inona no hafatra lehibe ampitainy amin’izy ireo eto ary ahoana no anehoan’ireo teniny ireo amintsika fa zava-dehibe ny fahatakarana ny faminanian’ny Testamenta Taloha ary nahoana no tena ilain’ny Kristianina tokoa izany, na dia amin’izao andro izao aza?